Accueil > Gazetin'ny nosy > Zandary : Kapiteny indray no mibaiko kolonely
Trangan-javatra iray porofon’ny ezaka ataon’ny fokonolona ho amin’ny fampandrosoana miainga eny ifotony no mitranga ao amin’ny fokontanin’i Tsarahonenana any amin’ny Kaominin’i Merimandroso any Ambatondrazaka, nefa dia olom-bitsy no misakana azy ary manana fahasahiana mialokaloka sy mandrangaranga ny maha-akaiky ny mpikambana ao amin’ny governemanta azy.
Efa tany amin’ny taona 2011 tany mantsy no nangataka tamin’ny fanjakana foibe ny mponina any amin’io tanàna io mba hampidirana herin’aratra ny tanàna. Ankehitriny vao nivaly izany saingy tsy ny fanjakana foibe no namaly ny hetahetan’ny mponina fa tsara sitra-po miaraka amin’ny zanaka ampielezana.
Rehefa hiroso amin’ny fametrahana ny fotodrafitrasa ny tany an-toerana dia nijoro manohitra izany ny fianakaviana iray, ary ity fianakaviana ity dia manana zanaka miasa aty Antananarivo, izay tsy hafa fa manamboninahitra ambony eo amin’ny laharan’ny zandary, ary akaikin’ny mpikambana iray ao amin’ny governemanta. Mijoro mirehareha mihitsy io manamboninahitra ambony io fa “amin’ny maha-akaiky ny Sekreteram-panjakana misahana ny zandarmariam-pirenena, ny Jeneraly Ravalomanana Richard, ahy dia tsy azo aorina eto an-tanàna io fotodrafitrasa famokarana herin’aratra io”.
Dia tonga hatrany amin’ny fandrahonana ny ben’ny tanàna sy ny tompon’andraikitry ny fokontany hogadraina. Nahoana loatra?
Ambaran’ity kapiteny ity mantsy fa “nanodinkodina ny volan’ny fokonolona ny ben’ny tanàna amin’izao tetikasa izao ka raha miana-kendry amin’io famokarana herin’aratra ho an’ny mponina io dia tsy maintsy hizaka ny valin’ny heloka nataony”.
Etsy ankilany, isan’ny zanaka ampielezan’ity tanàna any Tsarahonenana Merimandroso Ambatondrazaka ity ny manamboninahitra ambony iray hafa, eo amin’ny laharan’ny kolonely. Mba nanadihady ny toe-draharaha ka nikasa ny hanelanelana mba hamahana ny olana ity kolonely ity saingy nanangam-bovona sady nandrahona no nibaiko an’ilay kolonely ilay kapiteny mba hipetraka tsara sy tsy hiditra amin’io raharaha io raha tsy te haita angano (???).
Endrika iray isehoan’ny finiavan’ny fokonolona hiditra an-tsehatra amin’ny fampandrosoana ifotony izao zava-misy any Tsarahonenana Merimandroso Ambatondrazaka izao, nefa dia olom-bitsy no mijoro misakana ny finiavana sy ny risi-pon’ny mponina, ary mampiasa ny toerana maha-akaiky ny mpikambana iray ao amin’ny governemanta azy.
Asa aloha raha manaiky ny hampiasana ny anarany amin’izao raharaha sadasada izao ny Jeneraly Ravalomanana Richard na mba hiezaka hanao fanadihadiana koa ka hiteny an’ity manamboninahitra kapiteny eo akaikiny ity raha toa ka tena manao zavatra tsy rariny izy.
Ny re aloha, rehefa niakatra teo anivon’ny fiadidiana ny distrikan’Ambatondrazaka ny raharaha dia niezaka nandray ny andraikiny ho fandaminana tokoa ny tonian’ny distrika, saingy tsy mbola mifarana izany tamin’iny farampatran’ny herinandro iny.
Dia miara-manara-maso ny raharaha isika.